Anund Farm iyo Vike track gucleynta | Holmbygden.se
Anund beer track gucleynta
Waayo, kuwa raba in ay qaataan skiing a cabdo ama socod xagaaga fiican yihiin laba tamashle sano furan wareega. A tareenka yar dhireedku iyo ciinwaanka gaaban i Anundgård at 2,5km. Intaa waxaa dheer waa track dheeraad ah beddelka ah ee 8km (t.o.r.) ka Anundgård in Österström, taas oo ku xirmaan gaaban ah. goobaha ku haboon bilowga / dhamaysto la goobaha baabuurta la dhigto wanaagsan yihiin Holm Vallen, Anund Manor School iyo Österströms Estate. Xilliga jiilaalka, tareenka waxaa lagu hayaa si joogta ah xaalad wanaagsan marka cover baraf ogolaanaya. Si aad xaq u leedahay in aad had iyo jeer ka heli doontaa xaaladda track hadda. nalalka Electric si toos ah iyo meelo xusullada ilaa saacad 22:00.
Contact wixii macluumaad:
. warbixinta ugu dambeeyey
ka jeexdin ah:
Holm Wallen tamashle Map
(waayo, size waaweyn – riix halkan)
Macluumaad dheeraad ah oo la maps, iwm. waxaa laga heli karaa skidspår.se:
qararka Skidspår.se / Västernorrland / Sundsvall / Stockholm
Vike track gucleynta
Xataa Vike waa a 2,5 kilomitir oo wadiiqooyin loo yaqaan ay stafettävlingar sanadlaha. track waxaa ciinwaanka iyo bilowgii iyo dhameystaan ​​dugsiga Vike. Waxa kale oo aad dooran kartaa loop a gaaban 1 km. track waxaa maamula Vike xarunta Voluntary.
Suuroggalaan of Nuur waxaa gacanta sameeyo sumadda hoos ilayska at xasho ah, calaamad arko isla goobta. Nalka dami doonaa si toos ah 21:30.
Macluumaad dheeraad ah oo la maps, iwm. waxaa laga heli karaa skidspår.se: Skidspår.se / Västernorrland / Sundsvall / Vike
Waa maxay shuruudaha skiing doono?
cimilada maxali ah oo faahfaahsan Saadaasha for Holm maalmaha soo socda waxaad arki doontaa in cimilada.